Xilliga Kama Dambeeya: Abaalmarinta Teknolojiyadda 2020
Sanduuqa Maaliyadeed ee McKnight ee Neuroscience wuxuu taageeraa cilmi-baaris cusub oo loogu talagalay in saynis loo soo dhowaado maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daweyn karo. Si taas loo gaaro, Sanduuqa McKnight Endowment for Neuroscience wuxuu casuumayaa waraaqaha ujeedka ah ee loogu talagalay abaalmarinta 2020 ee McKnight ee Tiknolojiyadda Neuroscience.
Hadaf ka mid ah abaalmarinada tikniyoolajiyada ayaa ah in la kobciyo wadashaqeynta u dhaxeysa neerfaha iyo cilmiga kale; sidaa darteed, codsiyada wadashaqeynta iyo iskuulada edbinta ah ayaa si cad loogu casuumay. Faahfaahinta abaalmarino hore, booqo bartayada internetka.
Codsadeyaashu waa inay qabtaan ballamo waqti-buuxa ah heerka darajada kaaliye-yaasha ama ka sareeya, tusaale ahaan macallin ku-takhasus leh ama borofisar, machadyada ku yaal Mareykanka. Saynisyahanada haysta cinwaanno kale sida borofisar cilmi-baaris, borofisar ku-takhasus leh, aqoonyahan cilmi-baaris cilmi-baaris, borotiin booqde, ama macallin wax u qalma. Codsadayaashu ma noqon karaan shaqaale Machadka Caafimaadka Howard Hughes ama saynisyahano ku jira Barnaamijka Baaritaanka Intramural ee Machadka Caafimaadka Qaranka. Miisaaniyada waxaa loo isticmaali karaa howlo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin looma adeegsan karo mushaarka qofka qaata. Codsadayaashu maheysan karaan nooc kale oo ah McKnight Endowment Fund oo loogu talagalay abaalmarinta Neuroscience taas oo kuxiran doonta abaalmarinta tikniyoolajiyada farsamada.
Waxaa jira nidaam xulasho laba marxaladood ah, oo ka bilaabma warqad ujeedo ah (LOI). Gudiga soo xulista ayaa dib u eegi doona LOIs waxayna casuumi doonaan codsadayaal dhowr ah si ay u soo bandhigaan soo jeedinno dhameystiran oo lagu qiimeyn doono salka ku haynta hal abuurka, faa iidada ugu jirta qaabkan cusub, iyo ahmiyada dhibaatooyinka la xallin doono. Illaa saddex abaalmarinno ayaa la sameeyaa sannad kasta, oo mid waliba bixinayo $ 100,000 sanadkiiba laba sano. LOI waxay ku egtahay Diseembar 2, 2019 (saqda dhexe ee aagagagii ugu dambeeyay dhulka). Soo-jeedinta buuxda waxay noqon doontaa bisha Abriil 27, 2020, oo deeqduna waxay bilaabmaysaa Agoosto 1, 2020.
NIH Biosketch baaraha kasta (qaabka cusub ee sanadka 2015)
Haddii aadan helin xaqiijinta emaylka ee risiidhkaaga LOI toddobaad gudeheed ee soo gudbinta, fadlan kala xiriir Taylor Coffin taleefanka 612-333-4220 ama tcoffin@mcknight.org.
Xilliga Kama Dambeeya: 2021 Abaalmarinta Cudurka Maskaxda ee Neurobiology
Abaalmarinta McKnight $1.2 Milyan oo loogu talagalay Daraasadda Xusuusta iyo Xanuunnada Maskaxda
Abaalmarinta Teknolojiyadda McKnight ee 2019